Julia Olmstead waxay u keentay McKnight aqoon ballaadhan oo ku saabsan siyaasadda ilaalinta beeraha iyo rikoodhka rikoodhka hirgelinta mashruuca guul gaadhka ah. Ka hor intaanay ku biirin Hay'adda, waxay u adeegtay sidii isku-duwaha mashruuca Golaha Beeraha ee Beeraha-Led ee Jaamacadda Wisconsin-Extension, halkaas oo ay qorsheysatay, bilawday, oo maamushay daneeyaal badan oo saamileeyaal ah oo ka shaqeeya beeraha. Mashruucan ayaa xoojiyay hay'adaha dawlada (gobolka, gobolka, iyo federaalka), beeraleyda, ganacsatada, iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn, waxayna noqdeen nooc degaan ah oo loogu talagalay ilaalinta beeraha ee iskaa wax-u-qabso ah, oo ay ku salaysan tahay beeraha.
Markii hore, waxay afar sano u shaqeysey asaare sare oo loogu talagalay barnaamijyada miyiga degaanka ee Machadka Beeraha iyo Beeraha ee Minneapolis. Waxay sidoo kale leedahay waayo-aragnimo u shaqeyneysa qoraaga wargeyska NBC Bay News ee San Jose, CA, iyo daabacan maqaalo, maqaalo saxaafadeed iyo fikrad guud oo ballaaran, oo ay ku jiraan Sayniska Cunnada, Smithsonian magazine, iyo Los Angeles Times.
Asal ahaan St. Paul, Olmstead wuxuu haystaa shahaadada bachelor-ka ee botaniska iyo Isbaanishka ee UW-Madison, iyo laba shahaadada qalinjabinta - Master of Science ee beeraha warshadda iyo beeraha waayeelka ah ee Jaamacadda State University, iyo Master of Journalism oo ka socda UC-Berkeley.
Meelaha Minnesota ee Tayada Tayada
By Julia Olmstead July 2018